Duqeymaha Israel Oo Weli Ku Socda Gaza Iyo Xamas Oo Gantaallo Ku Jawaabeysa – Great Banaadir
GAZA – Ciidamada Israel ayaa lasoo dhoobay xuduudda Gaza, xilli ay weli duqeyn ku socoto magaalada, halka ururka Xamas ay ayagana gantaallo ku garaacayaan Israel, ayada oo xaaladda ay kasii dareyso.
Dhinaca kale, weeraradii ugu dambeeyey ee gantaallo ee Xamas, ayaa mid kamid ah wuxuu ku dhacay dhisme ganacsi oo ku yaalla caasimadda Tel Aviv, halkaasi oo ay ku dhaawacmeen shan Israa’iiliyiin ah, sida ay sheegeen booliska.
“Israel oo dhan waxaa ku socda weerar. Waa xaalad aad cabsi u leh in lagu sugnaado,” waxaa sidaas yiri Margo Aronovic oo ah 26 jir arday ah oo ku sugan Tel Aviv.
Isha Warka: Reuters oo loo soo maray VOA Somali